नेपाल आज | बन्दकर्तालाई प्रश्नः हिजो प्रचण्डसँग मिलेर १७ हजारको ज्यान लिनुभयो, अहिले उनीविरुद्ध नै आन्दोलन ?
आइतबार, २८ कार्तिक २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
बन्दको आयोजना गरेपछि गरिब जनताको आय मर्छ । उनीहरुको क्रयशक्ति कमजोर हुन्छ । उनीहरुकालागि महंगी झन बढ्छ । तपाईहरु महंगी नियन्त्रण गर भन्दै नेपाल बन्द गर्नुहुन्छ । आन्दोलन उल्टो भएन ? – जनताले संघर्ष गर्दा यदि सत्ताका सञ्चालकहरु जिम्मेवार भएनन् भने संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । कहिले कडा रुप हुन्छ कहिले नरम । जनआन्दोलन, जनसंघर्ष, जनयुद्ध पनि संघर्ष नै हो । यी रुपहरुबाट कहिलेकाहीँ जनता बढी प्रभावित हुन्छ । तर यो सबै स्थिति सिर्जना गर्ने राज्यका सञ्चालक हुन् ।
राज्य सञ्चालन गर्नेलाई तपाईको आन्दोलने के फरक पर्छ त ? –हो उनीहरु महलमा बस्छन् । एकजनाले लाजिम्पाटमा दरबार सञ्चालन गरेका छन्, अर्काको त बुढानिलकण्ठमा पहिलेदेखि नै छ । यीनीहरुले नै देशमा यो स्थिति सिर्जना गरिरहेका छन् । देशद्रोही हर्कत गरेर राष्ट्रियता संकटमा पुर्याएका छन् । यीनीहरुविरुद्धको राजनीतिक संघर्ष जारी छ ।
हिजो प्रचण्डसँग मिलेर १७ हजारको ज्यान लिनु भयो । अहिले फेरि यीनै प्रचण्डविरुद्ध आन्दोलन गरिरहनु भएको छ । तपाईहरुको आन्दोलन एउटा विन्दुमा पुगेर सकिन्छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउँने ? – आन्दोलन भनेको राष्ट्र र जनताको हितमा गर्ने हो । राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले गलत काम गर्न लागे भने गर्ने हो । सत्तामा हिजो को थियो, आज को छ महत्वपूर्ण हुँदैन । जनयुद्ध गरेर आएका प्रचण्डले केही गतिलो काम गर्लान भन्ने सोचेका थियौं । यीनले त एमाले र कांग्रेसलाई जितेर राष्ट्रघात गर्न थाले । अस्ति मुखर्जी आउँदा हामीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जसलाई भन्छौं उनीहरु त मुखर्जीका नोकर रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो । यस्ता राष्ट्रघातीविरुद्ध संघर्ष त गर्नै पर्यो नी ।
अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाउने, फेरि शिविर सञ्चालन गरेर नागरिकता बाँढ्ने जस्ता गम्भीर विषय अगाडि आएका छन् । मुख्य कुरा एकातिर तपाईहरु चाहिँ कुम्लो बोकेर अर्कै तिर जस्तो भएन ? हामीले २ महिना अगाडि नै यो बन्दाको घोषणा गरेका थियौं । त्यो भएकोले यी पछिल्ला घटनाक्रम नसमेटिएको जस्तो देखिएको हो । अंगीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरा त दलाली र आत्मसपर्मणको पराकाष्ठा नै भयो । फेरि नागरिकता बाँडेर मुलुकलाई क्रिमियाकरण गर्न खोजिएको कुरा स्पष्ट छ । यस्ता गद्दार राष्ट्रका कुपुत्रहरुविरद्धको आन्दोलन अझै कडा भएर आउँछ ।
आफ्ना पूर्वअध्यक्ष, देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकालागि केही सन्देश छ ? – भक्तपुर, बौद्ध र ललितपुरमा ‘महंगी नियन्त्रण गर’ भनेर उभिँदा पनि हाम्रा कार्यकर्तालाई प्रचण्ड सरकारका प्रहरीले पक्राउ गर्यो । जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका कारण पनि उहाँले एमाले र कांग्रेसलाई उछिनेर निरंकुश हुनुभएको होला । तर म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बाहिर हेर्नुहोस सडकमा । सरकारको राष्ट्रघातविरुद्धको आन्दोलनमा जनताको ऐक्वबद्धता ।